Shiinaha Vertical power sare 808 755 1064 mowjado isku dhafan oo xirfadlayaal soprano baraf diode laser saarista timaha DY-DL202 Soosaarka iyo Warshadda | Daanye
Waxay isticmaashaa teknolojiyad ku saleysan isbeddellada doorashada ee iftiinka iyo kuleylka.
Iftiinka leysarka waxaa nuugaya melanin ku jirta xididdada timaha waxaana loo beddelaa kuleyl sii kordhaya heerkulka follicle timaha taas oo kor u qaadaysa heer ku filan si aan dib uga soo noqosho lahayn u dhaawaceyso qaab dhismeedka timaha.
Timaha ayaa baabi'i doona ka dib geedi socodka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah waxayna gaarayaan ujeedada timo joogta ah.
Tamarta leysarka waxaa si xulasho ah u nuugaya halka timaha ka soo baxa, sidaas darteed unugyada ku hareeraysan lama kululaan doono waxyeello waarana ma jirto.
755nm / 808nm / 1064nm 3 waxtarka 1
Loogu daray 808nm Dhamaan Nooca Maqaarka, Dhamaan Midabada Timaha;
DIODE SASKA 808NM;
Iyada oo la socota Gemany Diode Laser la Keeno; Waqtiga Daaweynta Nuska Ku samee fadhiyo badan oo daaweyn ah waqti yar, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si dhakhso leh u daweyso aagag waaweyn, adoo bukaankaaga u fidinaya dareenka ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee timo ka saarista.
Laydhka ugu caansan 755nm diode kaas oo badala laser-ka adag ee alexandrite diode isla markaana leh daaweyn aad u raaxo badan. Waxay wax ku ool u tahay melanin inuu dhuuqo 755nm diode laser. Sifadaani waxay kufiicantahay timo soosaarida villi markay dadku isticmaalaan 755nm diode laser treatment handle. Waqtigana daaweyntu sii gaabinayso.
Khibrad cusub oo ku saabsan takhasus gaar ah oo maqaarka looga saarayo 1064nm laser, 1064nm dhererka dhererka daaweynta timaha ayaa ka badbaadi doonta gaar ahaan maqaarka madow, maqaarka oo cusbooneysiiya. waxqabadka si fiican, iyo shaqo qaboojin xoog leh, daaweyn raaxo leh oo ammaan ah.
Mawjada 808nm 755nm 1064nm hirar isku dhafan
Awood gelinta qalabka 2000W
Cufnaanta awoodda 6-50J / cm2 lagu hagaajin karo baaxadda ballaca garaaca wadnaha oo go'an (Max.120J / cm2 la heli karo)
Ballaca wadnaha 80-200ms (Max.350ms ayaa la heli karaa)
Cabirka mashiinka L143cm * W44cm * H104cm
Miisaanka saafiga ah 34kgs
Hore: Qaboojinta Maqaarka Xirfadlaha DY-CSC
Xiga: Awood sare oo toosan 808 755 1064 mawjado isku dhafan oo xirfadle soprano baraf diode laser timo saarista DY-DL7
Salon wuxuu door bidaa seddex mowjadood oo isku dhafan iode ...
ROHS waxay ogolaatay timaha qurxinta quruxda 755 808 1064 ...